ယနေ့ခေတ်တစ်ခုစတင် အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း မှန်ကန်သောစီးပွားရေးအစီအစဉ်၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်လယ်သမားများအားအန္တရာယ်မဖြစ်စေသောဓာတ်မြေသြဇာများထောက်ပံ့ပေးမှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များကိုသာမက၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးထိရောက်မှုအပါအဝင်။ switchingအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာမှအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ် လယ်သမားများအားမြေဆီလွှာသက်တမ်းတိုးရန်၊ ရေအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်၊ သီးနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏အထွက်နှုန်းတိုးစေရန်ကူညီနိုင်သည်။ ထိုအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်မြေသြဇာထဲသို့မည်သို့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းကိုမည်သို့စတင်မည်ကိုလေ့လာရန်မှာအဓိကကျသည်။ ဤတွင် YiZheng သည်စတင်သောအခါအောက်ပါအချက်များမှအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များကိုဆွေးနွေးပါမည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ.
မြေသြဇာလုပ်ငန်းတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာများကိုညွှန်ပြပြီးသီးနှံအထွက်နှုန်းကိုမြင့်မားစေပြီးပတ်ဝန်းကျင်၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာကိုစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ factor တွင်ကြီးမားသောစျေးကွက်အလားအလာရှိသောအရေးကြီးလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ as အဖြစ်လူသိများသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ development ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာပိုမိုထင်ရှားလာသည်။ ဤအမြင်တွင်လုပ်ငန်းရှင် / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အမြတ်အစွန်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းစတင်ပါ.
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအစိုးရများသည်အော်ဂဲနစ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်အထောက်အပံ့များပေးခဲ့သည်။ ၎င်းမှာပစ်မှတ်ထားသောထောက်ပံ့ငွေများ၊ စျေးကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ စွမ်းရည်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ဘဏ္financialာရေးအကူအညီများဖြစ်သည်။ ဥပမာ - အိန္ဒိယအစိုးရသည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာတိုးမြှင့်ခြင်းကိုတစ်ဟက်တာလျှင်ရူပီး ၅၀၀ အထိတိုးမြှင့်ပေးသည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်နိုင်ဂျီးရီးယားစိုက်ပျိုးရေးဂေဟစနစ်ကိုရေရှည်တည်တံ့စေရန်အတွက်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကတိပြု အလုပ်အကိုင်နှင့်ကြွယ်ဝမှု။
လူတို့သည်နေ့စဉ်အစားအစာများ၏လုံခြုံမှုနှင့်အရည်အသွေးကိုပိုမိုသိရှိလာကြသည်။ အော်ဂဲနစ်အစားအစာ ၀ ယ်လိုအားသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်အတွင်းတိုးတက်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအရင်းအမြစ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အစားအစာဘေးကင်းရေးကိုကာကွယ်ရန်အခြေခံကျသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အော်ဂဲနစ်အစားအစာများကိုပိုမိုသိရှိနားလည်လာခြင်းသည်အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်များစွာသောအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုနေ့စဉ်ထုတ်ယူသည်။ စာရင်းအင်းအရတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်နှစ်စဉ်တန်ချိန် ၂ ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ရန်ကုန်ကြမ်းများသည်များပြားပြီးကျယ်ပြန့်သည်။ ဥပမာ - ကောက်ရိုး၊ ပဲပုပ်၊ အမှုန့်နှင့်မှိုအကြွင်းအကျန်များ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်အညစ်အကြေး (နွားမစင်၊ ဝက်ချေး၊ သိုးမောက်၊ မြင်းနှင့်ကြက်ချေးကဲ့သို့) ။ စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (vinasse, ရှလကာရည်၊ ကျန်ရှိသော၊ ပီလောပီနံအကြွင်းအကျန်နှင့်ကြံမှုန့်ပြာ)၊ အိမ်ထောင်စုအမှိုက်များ (အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်မီးဖိုချောင်အမှိုက်ကဲ့သို့) ။ ၎င်းသည်များစွာသောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်များပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာစေသည်။
အတွက် site တည်နေရာရွေးချယ်မှု အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ မူများကိုလိုက်နာသင့်သည်
●အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခြင်း (သို့) ကုန်ကြမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်အနံ့ရှိခြင်းကြောင့်နေထိုင်သူများ၏ဘ ၀ ကိုထိခိုက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်လူနေအိမ်ရာမှဝေးဝေးနေပါ။
●မြေပြန့်ဒေသ၊ ခက်ခဲသောဘူမိဗေဒ၊ ရေနည်းသောနေရာနှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်နေရာချသင့်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လျှောကျခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသို့မဟုတ်ပြိုကျခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်နေရာများကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။
# နေရာကိုဒေသအခြေအနေနှင့်မြေယာထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်သင့်သည်။ ပျင်းရိသောမြေများနှင့်မြေများကိုအပြည့်အဝ အသုံးချ၍ လယ်ယာမြေများကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ မူလအသုံးမပြုတဲ့နေရာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးသုံးပါ၊ ပြီးတော့သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
● အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ ဖြစ်နိုင်ရင်စတုဂံဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံareaရိယာသည် ၁၀၀၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ should ခန့်ဖြစ်သင့်သည်။
●လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုစနစ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလျှော့ချဖို့နေရာဟာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများနဲ့အလှမ်းဝေးနေလို့မရပါဘူး။ ထုတ်လုပ်မှု၊ နေထိုင်မှုနှင့်မီးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်ရေပေးဝေမှုအနီးတွင်ရှိသင့်သည်။
စကားလုံးတစ်လုံးအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ရန်လိုအပ်သည့်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများအထူးသဖြင့်ကြက်မြေ man ဇာနှင့်စက်ရုံမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုစျေးကွက်နေရာနှင့်ကြက်ခြံများတွင်အဆိုပြုထားသောစက်ရုံနှင့်နီးကပ်စွာထားရှိသင့်သည်။